China Cold spraying road marking machine machine sy mpamatsy | FANASITRANA ACE
Masinina manamarika arabe manasitrana lalana
Ny milina fanosotra mangatsiaka manosika tanana dia milina fanamarihana faneriterena avo lenta sy miorina amin'ny onjam-peo. Ity motera ity dia entin'ny motera iray hanosehana paompy plunger-pressure avo miasa, avy eo manosika ny loko hofafazana tsindry mafy. Ny milina iray manontolo dia manana tombony amin'ny firafitra tsotra, ny fikojakojana mety ary ny lanjany maivana. Ary koa maodely isan-karazany ho an'ny basy fanefitra tokana sy roa, ny mpampiasa dia afaka misafidy ny hanome fahafaham-po ny filàna samihafa.
Ny milina fanamarihana lalana manosika tanana dia ampiharina amin'ny fanamarihana ny arabe amin'ny seranam-piara-manidina, toeram-pijanonana, toeram-pitrandrahana ary faritra mangatsiaka hafa miaraka amin'ny fandidiana mora, tsy dia miasa, mahomby amin'ny fanamarihana avo.
TW-CP Mangatsiaka mandoko milina
Refy ivelany (L * W * H) 1250 mm X1000 mm X1200mm
Milanja tanteraka 240KG
Maotera herinaratra Masinina Honda 5.5HP
Famonoana mety Loko mangatsiaka manamarika loko (acrylic acrylic)
Mikoriana ny loko 10L / Min
Fanerena paompy 8-12MPA
Matsilo mifanentana Bokin'i Changjiang
Basy manefy Azo ampiasaina miaraka na misaraka
Ny hatevin'ny lamba 1.2-4mm
Vata vakana fitaratra
Rafitra fanaraha-maso vatan-kazo marefo
Fahombiazan'ny asa isan'andro 3000m²
1.Energy famonjena sy fiarovana ny tontolo iainana: mitahiry fitaovana 30% raha ampitahaina amin'ny famafazana rivotra nentim-paharazana, tsy misy fanampiana amin'ny rivotra, tsy misy fikafika ary fiarovana ny tontolo iainana
2.Ny teknolojia famafazana tsy misy rivotra izay mitondra ny paompy avo lenta miaraka amin'ny motera misy lasantsy dia ampiharina hanamarihana eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena, ny endrika tsipika dia mazava, malama, feno ary mitovy amin'ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny asa.
3 Vokany mahery: vokarin'ny atomika avo lenta, firaiketam-po mahery, tsy misy zoro maty amin'ny fanamboarana, malefaka ary ambonin'ny velarana mihitsy aza.
4.Ny fonosana dia mora esorina, ary ny nozera samihafa dia azo soloina hifehezana ny sakany hafa. Azo ampiasaina ho toy ny tsifotra tsy misy rivotra amin'ny marika na famantarana.
5.Pushing amin'ny tanana, fihodinana malalaka, orientation azo antoka ary familiana malefaka.
Basy fitifirana hafa noho ny sakany isan-karazany
Ny sakany mm
Haavon'ny loha ny mm （momba）
(Fandefasana tsy tapaka)
Fanamarihana: ny haavon'ny noza dia mifandraika amin'ny viscosity ny loko sy ny tsindry paompy fanasitranana.
1.Ahoana ny serivisy aorian'ny fivarotana?
A: Tompon'andraikitra amin'ny fanomezana torohevitra ara-teknika mandritra ny androm-piainan'ny masinina izahay. Manampy amin'ny famahana olana amin'ny alàlan'ny Whatsapp, Skype, ary mailaka izahay amin'ny fandefasana sary sy horonan-tsary.
3. Ahoana ny amin'ny fandefasana?
4.Ahoana ny fanamarihana ny tsipika amin'ny sakany samihafa?
A: A: Safidinao io. Matetika izahay dia manoro hevitra ny fandefasana ranomasina izay manome vidiny mirary. Ary koa, ho an'ny kojakoja fanampiny, dia mety ho ao amin'ny FEDX, DHL ary ny express iraisam-pirenena ..
Previous: Masinina manamarika ny lalana
Manaraka: Masinina manamarika arabe rehetra
Fandefasana herinaratra mivaingana 46inx2
ZID-UL-2000W Vibrator matevina matetika
12000RPM vovoka mangovitra beton haingam-pandeha